Home Sheekooyinka Kubadda Cagta ee Aasiya Sheekada Carruurnimada Caglar Soyuncu iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta oo leh naanaysta "Cagaarshow". Our Caglar Soyuncu Childhood Story Plus Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Kacitaanka Caglar Soyuncu. Astaanta Sawirka: Haberekspres, SkySports, TTF iyo Instagram
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu yahay kan gaar ah, Muuqaal wanaagsan Daafac, mid cabsi iyo yaab leh oo loo sameeyay ciyaarta casriga ah. Si kastaba ha noqotee, kaliya in yar oo ka mid ah taageerayaasha kubbadda cagta ayaa tixgeliya Caglar Soyuncu's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
Caglar Soyuncu wuxuu ku dhashay Maalinta 23rd ee May 1996 waalidkiis Mr. iyo Mrs. Ömer Söyüncü oo ku taal magaalada İzmir, Turkey. Markii uu dhashay, waalidkiis, oo raacaya caadooyinka qoyska ee Turkiga ayaa hubiyay inuu dhalay kii ugu adkaa magacyo qoran oo leh dhibco dhibic waligood loo yaqaanay taageerayaasha kubada cagta Ingariiska. Magacaasi waa “Ağlar Söyüncü".
Ceglar Söyüncü wuxuu qoyskiisu asal ahaan ka soo jeedaa Izmir, oo ah magaalo ku taal dalka Turkiga (magaalada seddexaad ee ugu dadka badan Turkiga) mar ay maamusho Boqortooyadii Roomaanka ee caanka ku ahayd ALEXANDER CARRUURTA oo mar lahaa magaalada. Isir ahaan, waa wax fiican in la yidho Ceglar Söyünc little (sawirka hoose) wuxuu lahaan karaa xididdada qoyskiisa iyo safka 'Great' Rabbi Aasiya- ALEXANDER GUUL.
Caglar Soyuncu wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa İzmir, magaalo ku taal xeebta Aegean ee Turkiga. Astaanta Sawirka: GoogleMaps iyo Instagram
Wuxuu ku koray guriga dabaqadda dhexe, Caglar Soyuncu wuxuu noloshiisa hore ku qaatay nolosha Menemen degmada İzmir waalidkiis iyo xubno kale oo qoyskiisa ah. Waxaa lagu soo koray qoys leh ixtiraam sare diinta Islaamka iyo dhaqanka.
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Ku soo koray magaalada weyn ee Izmir, waxbarashada carruurtu kuma eka oo keliya barashada qarniyadii hore iyo hadhaagii kale ee dagaalladii intii lagu jiray xukunkii Roomaaniya iyo Cusmaaniyiinta. Caglar yar, waxay ku saabsan tahay kubbadda cagta. Madadaalo xiisaha leh wuxuu noqday qayb ka mid ah isaga, gaar ahaan waxbarashadiisa ka dib.
Ciyaaraha xiisaha leh, Caglar wuxuu ciyaari jiray kubada cagta maalintii oo dhan, gaar ahaan xilliyada ciidaha iyagoon caajisin. Si dhakhso ah, canugga gaarka ah wuxuu horumariyey xiisaha uu u qabo kubbadda cagta xirfad ahaan, go'aan si weyn u taageeray waalidkiis.
Kadib wadatashi badan oo uu la yeeshay waalidkiis iyo macallimiinta iskuulka, Soyuncu wuxuu damacsanaa inuu noqdo shaqsi wuxuuna isku qorey Menemen Belediyespor, oo ah iskuul kubbadda cagta ee degmada Menemen ee İzmir. Markii la diiwaangaliyo, isaga (sawirka hoose) Waxaa loo diray weeraryahan oo ma ahan difaac kaasoo dunidu goor dambe ogaatay inuu yahay.
La kulan Caglar Soyuncu wax yar uun ka dib markii uu ku biiray kooxdiisii ​​ugu horreysay ee akadeemiyadeed. Astaanta Sawirka: Instagram
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Mudnaanta Hore
Akadeemiyada kubbadda cagta ee Menemen Belediyespor ayaa siisay Soyuncu fursad uu ku soo bandhigo kartidiisa hore ee maamulayaasha wakiilada, Scouts, tababarayaasha iyo naadiyada naadiyada. Kuwa xiisaha leh, marna shaki badan kama qabin inuu ku socdo jihada saxda ah. Sida cunug kasta oo kale oo iskuulka jooga, Soyuncu wuxuu rajeynayaa Ku ciyaar İzmir Football League- Horyaalka kubada cagta ee Izmir, waa magaaladiisa Turkiga.
Ka dib lix sano oo uu la ciyaarayay Menemen Belediyespor, Soyuncu sanadkii 2011 wuxuu arkay riyadiisii ​​xirfadeed ee uu la joogay Horyaalka Kubadda Cagta İzmir ee Kubadda Cagta Wuxuu tijaabo guul leh la yeeshay Bucaspor, naadi ka ciyaara gobolka Horyaalka kubada cagta ee magaaladiisa, Izmir. Kooxda, Caglar Soyuncu oo da 'yar ayaa dib loogu celiyay qadka dhexe iyo markii dambe, daafac dhexe oo uu sii watay xitaa xirfad ahaan.
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Waddada Weyn
Istaraatiijiyadda lagu dhimayo Horyaallada Hoose si loo Kordhiyo: Inta badan dhalinyarada Ciyaartoyda kubada cagta ee mar loo diyaariyey qalin jabinta akadeemiyada (tusaale. John Lundstram), sida ugu wanaagsan ee lagu amaan geli karo qalin jabinta ama lagu aqoonsan karo dadka indha indheeya kubada cagta ayaa ah in hoos loo aado horyaallada. Halkaas, xulashada koox-kooxeed hore ayaa la hubo oo wareejinta ayaa si fudud looga gorgortami karaa.
Tani waxay u noqotay qorshihii ugu fiicnaa ee Caglar Soyuncu oo u aaday Gümüşorduspor, horyaalada hiwaayadda Turkiga halkaas oo laguula dhaqmay sidii boqor oo kale, isagoo sugaya inuu galo qalin-jabinta akadeemiyada. Isla markii qalin-jebinta akadeemiga ee Gümüşorduspor, Söyüncü waxaa loo wareejiyey kooxda sarsare ee Altınordu, koox ka cayaartay heerka labaad ee nidaamka horyaalnimada kubada cagta Turkiga. Tani waxay sidoo kale tahay naadi caan ku ah mashruuca dhalinyarada da 'yarta ah qaybaha kale ee Yurub.
Caglar Soyuncu waxa uu lahaa hal hadaf inta uu joogay Altınordu- INAAD KU CIYAARO DALKA KELIYA. Astaanta Sawirka: Kralspor
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Kusoo caan bax
Wixii ka dambeeyay xilli ciyaareedkii 2016 / 2017, Caglar Soyuncu wuxuu ku socday waddo Yurub isagoo la saxiixanaya naadiga Jarmalka SC Freiburg. Waxay ahayd go'aan uu dareemay inuu yahay doorashada ugu fiican ee mustaqbalkiisa iyo horumarintiisa. Soyuncu wuxuu kooxda yimid waqtigii saxda ahaa, waqti uu SC Freiburg haatan u dalacsiiyay Horyaalka heerka koowaad ee Jarmalka (Bundesliga).
At SC Freiburg inta lagu gudajiray 2016 – 17 xilli ciyaareedkii, Caglar wuxuu bilaabay inuu qaato qaab naxariis darro ah ficilkii difaaca, isaga oo difaacanaya wax kasta oo soo baxa. Isaga hal adayg heer sare ah oo heer sare ah ilaa hal xilli, isagoo noqday mid kamid ah difaacyada ugu wanaagsan ee kubbadda cagta Jarmalka iyo Yurub.
Caglar Soyuncu wuxuu ku barbaaray jaranjarada ciidda Jarmalka, isagoo noqday mid ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan Bundesliga. Astaanta Sawirka: Irish Mirror, Zimbo, Iyo HITC
Kicitaanka Caglar Suyuncu wuxuu saadaaliyay inuu si toos ah ugu biirayo xulka qaranka Turkiga, horumarin ayaa keentay inuu xiriir la sameeyo Man City, Bayern Munich, AS Roma iyo Leicester oo dhamaantood jilbahooda u istaagay saxiixiisa. Waxay ahayd Leicester oo ugu dambeyntii ka adkaatay.
9 Agoosto 2018, Söyüncü wuxuu ku biiray Leicester, oo ah koox raadineysa xulasho dhanka daafaca ah ka dib markii ay sii kordheysay wararka la isla dhexmarayo ee ku aadan mustaqbalkooda daafaca. Harry Maguire. Bixitaankii Maguire wuxuu ka tegey taageerayaal badan oo Leicester ah oo wadnaha istaagay isla markaana Caglar Soyuncu wuxuu noqday ninka bogsiiya kuwa qalbi jabsan, ficil ayaa ka dhigay taageerayaasha Leicester inay weydiiyaan; Kumaa u baahan Harry Maguire?.
Kahor 2019 / 2010 bartamihii xilli-xilliyeedka, Caglar Soyuncu wuxuu horey u noqday halyeey dhaqan Leicester ah. Doodiisa eex ee dhanka difaaca isaga ka helay ammaan badan Brendan Rodgers.
Caglar Soyuncu wuxuu noqday difaac heer caalami ah Premier League. Astaanta Sawirka: DailyMail iyo Instagram
Awooda daafaca Soyuncu, gardarrada, kubad sameeynta iyo sifooyinka madaxeeda ayaa door weyn ka ciyaaraya cirka isku shareertay Leicester si ay u gaaraan booska labaad qeybtii hore ee xilli ciyaareedkii ugu horeysay ee 2019 / 2020 Premier League.
Shaki la’aan, taageerayaasha Leicester iyo anaga taageerayaasha kubada cagta waxaan qarka u saaran nahay inaan aragno mid kale Carles Puyol iyo Mat Hummels Isagoo u ifinaya hibo u gaar ah oo heer caalami ah isla markaana ku eegaya indhahayaga hortooda. Weyn Çağlar Söyüncü runti waa midka ugu fiican khadka toosa ee soosaarayaasha difaaca dhexe ee ka baxaya Yurub. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Xiriirka
Iyada oo kor u qaadistiisa caannimo iyo hanashada quluubta taageerayaasha Premier League, taageerayaal aad u fara badan ayaa kudhamey inay ogaadaan inuu Caslar Soyuncu leeyahay gabar ama xaas. HAA! Ma jiro wax diidaya xaqiiqda ah in uu muuqaal qurux badan Marka lagu daro qaabkiisa ciyaareed ma gelin karo kan ugu sareeya liiska liistada wiilasha saaxiibka la ah.
Markay arkeen inuu isagu caan ku noqday, Taageerayaal badan ayaa waydiiyey- Waa kuma Caglar Soyuncu Gabadha Saaxiibka ah? Astaanta Sawirka: IG
Baadhis aad u badan oo intarnetka ka dib, waxay umuuqataa Çağlar Söyüncü inuu ku dadaaley inuu iska muujiyo saaxibadiisa ama xaaskiisa (in uu yahay, haddii uu mar hore guursaday si qarsoodi ah) waqtiga qoraalka.
Dhanka kale, waxaan ognahay mararka qaar Horyaalka Premier League-ga in aan la cafiyi karin khaasatan marka ay tahay in aan ciyaarta si khaldan loogu dhex darin arrimaha xiriirka. Halka sCiyaartoyda omeedka waxay u arkaan hoos u dhackooda sababa la xiriira da 'ama koox cusub / nidaam, ilo kale oo hoos u dhac ah ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwa aan ahayn xiriir aan wanaagsaneyn. Sababtaas awgeed, inta badan ciyaartooyda Kubadda Cagta waxay door bidaan inay ka fogaadaan cilaaqaadka ama ay soo bandhigaan gabdhahooda marxaladaha muhiimka ah ee shaqadooda.
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Naftaada Shaqsiga
In la barto Çağlar Söyüncü Nolosha Shaqsiyadeed waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan shaqsiyankiisa, kana fogaan qofka aad ku aragto joogitaan joogto ah ee garoonka ciyaarta. Bilaabidda, waa nin qabow, oo jecel inuu muujiyo is-hoosaysiin, farxad iyo is-dhunkasho badan (sida caadiga ah ma ahan iskucelceliska dabeecada kubada cagta casriga ah).
Caglar Soyuncu Nolosha Qof ahaaneed ee ka Fog Darada. Sawirka Sawirka: IG iyo Twitter
Sidoo kale noloshiisa shaqsiyeed, Soyuncu waa shaqsi jecel oo saaxiibtinimo leh. Ka fog ciyaarista kubbadda cagta inta lagu jiro ciidaha, waxaad si fudud uga dhex heli kartaa shirkadda dad kala duwan. Soyuncu wuxuu la midoobaa dadka fasalada oo dhan, qaarkoodna wuxuu ku caawiyaa dhaqaale ahaan isaga oo aan wax soo celin ah.
Caglar Soyuncu wuxuu ku nool yahay nolol hab-nololeed hooseeya- wuxuu qarash gareeyaa asxaabta inta uu ka baxayo. Astaanta Sawirka: Twitter
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeedka ee aan loo Baxsan - nololeedka
Markay tahay qaab nololeedka Caglar Soyuncu, waa qof ilaaliya isku dheelitirka kharashka iyo keydinta lacagta. Shaki la'aan, qiimahiisa saafiga ah ee 12.5 Million Euro (10.8 Milyan Pound) iyo qiimaha suuqa ee "18 Million Euro"15.5 Milyan Pound) runti wuxuu ka dhigayaa kubad sameeyahan milyaneer ah. Noqo milyaneer hase yeeshe uma gudbo qaab nololeed qurxoon oo si fudud lagu arki karo gacan ka buuxo baabuurta qaaliga ah sida hoos lagu xusay.
Hab-nololeedka Caglar Soyuncu laguma aqoonsado gacmo ka buuxaan baabuur qaali ah wakhtiga qorista. Sawirka Sawirka: Instagram, Fikraddaada iyo Gym4u
Soo koobiddiisa nololeed, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in Caglar Soyuncu uu daawo u yahay nolosha qalaad, (ugu yaraan) waqtiga qoraalka.
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeedka ee aan loo Baxsan - Nolosha Qoyska
Qoyska Caglar Soyuncu waqtiga qoraalku ku nooshahay nolol khaas ah iyo mid furaha hoose ah oo ku taal dalka Turkiga inkasta oo paparazzi had iyo jeer ku jihaysan tahay jihada iyo siyaabaha badan ee lagula xidhiidho warbaahinta bulshada.
Marka uu dhex maro baraha bulshada, Caglar waqtiga qoraalku si dhib yar kuma uusan muuqan waalidkiis ama xubnaha reerkiisa ee ku jira xogtiisa. In kasta oo aqoonsigooda uu wali yahay mid sir ah, waxa ugu dhow ee uu u leeyahay qoyska ayaa weli ah saaxiibkiis iyo saaxiibkiisa xulka Cenk Tosun.
Midka ugu dhow qoyska Caglar Soyuncu waa Cenk Tosun, halka uu ka ilaaliyo xubnaha ugu muhiimsan indhaha dadweynaha. Sawir-amaahda Twitter iyo IB
Inkastoo ay jirto sameey dadaal dadaal leh si looga fogaado wax iftiimiya noloshooda gaarka ah, waxaa jira Caglar, dareenka waajibka walaalkiis (s), walaasha (yada) iyo qaraabada.
Caglar Soyuncu Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Dib-u-soo-celinta naxdinta leh ee boqorkiisii ​​hore ee mar xukuma magaaladiisa: Hal mar ama mid kale, waxaan mararka qaarkood ku dhacnaa qof qalaad oo noo sheegaya inaan u ekaano sidii qof ay yaqaanaan, sax?… Hagaag, waxaan soo xulnay Çağlar Söyüncü iyo Alexander the Great. Waxaad tahay garsoor!
Muuqaalka cajaa'ibka leh ayaa ka dhexeeya Caglar Soyuncu iyo Alexander the Great. Astaanta Sawirka: Britannica iyo FoxSportsAsia
Cimilada Kubadda Cagta: Ahaanshaha isboorti aad loo raaco ee adduunka oo dhan, waa iska cadahay in kubbada cagta inay u adeegaan dhiirigelin malaayiin taageerayaasheeda ah oo u arka iyaga, iyagoo u arkaa inay yihiin sanamyo. 2016, Caglar Soyuncu wuxuu sheegay in labadiisa sanam ay ahaayeen difaaca Spain Carles Puyol iyo kan caalamiga ah ee Jarmalka Mats Hummels.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay Akhriskayaga Caglar Soyuncu Childhood Story Plus Xaqiiqda Baroolajiga ee Untold. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Taariikhda Kubadda Cagta Turkiga
Dennis Praet Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh
Sheekada Carruurnimada Brendan Rodgers Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Harvey Barnes Sheekada Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekooyinka dhalinyarada ee Demarai Gray Story Plus
Hamza Choudhury Sheeko Weyn oo Xogta Lahaa Xogta Lahaanshaha
Jamie Vardy Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadalada
Taariikhda wax laga beddelay: 24-ka Meey, 2020
Mesut Ozil Story Story Plus Xogta Warka Xadida
Ben Chilwell Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Emre Can Childhood Story Sheekooyinka Xaqiiqooyinka Aan Bixin Karin